फोहोरको थुप्रोमाथि स्मार्ट सिटी - Naya Patrika
फोहोरको थुप्रोमाथि स्मार्ट सिटी
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | भदौ २५, २०७४
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोरिया भ्रमणमा छन् । ललितपुरका मेयर पनि भर्खर जापानको भ्रमण सकेर कोरियातिरै जाँदै छन् । उनीहरूले भ्रमणका लागि एउटा गजबको सहर रोजेका छन् : दक्षिण कोरियाको एउटा स्मार्ट सिटीलाई । यता, यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका वेला देशमा स्मार्ट सहर, स्मार्ट टोल, स्मार्ट गाउँको खुब प्रयोग भएको थियो । कोही पहिले सामाजिक जीवनमा कुनै खास योगदान पनि नगरेको तथा कुनै प्रमाणित परिणाममुखी काम गरेको विगत पनि नरहेको तथा सामान्य शैक्षिक योग्यता र ज्ञान–विज्ञान प्रविधिबारे त्यति मेलोभाँती नभएको मान्छे कुनै अमुक दलका तर्फबाट मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष या सदस्यका उम्मेदवार घोषित हुनासाथ स्वचालित रूपमा उसको मुखबाट निस्किहाल्थ्यो– म आफ्नो सहर, गाउँ, वडा या टोललाई स्मार्ट बनाइदिन्छु । यसका लागि केवल तपाईंहरूको मत भए पुग्छ । बाँकी मेरो जिम्मा भयो ।
पर्यटकदेखि राजधानीवासीसम्म सबैको एउटै प्रश्न छ— मेयरसाबहरू, स्मार्ट सिटीको सपना हामी पनि देख्दै गरौैँला, तर यो फोहोर उठ्नेचाहिँ कहिले ?
यही प्रकारको वाचाकबुल गरेर काठमाडौंको मेयर पदमा निर्वाचित भएका विद्यासुन्दर शाक्यको नाममा झन्डै स्मार्ट सिटीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दर्ता हुने छाँटसमेत आएको थियो । उनले आफूले पदभार ग्रहण गरेको सय दिनमै काठमाडौंमा चमत्कार गर्ने कसम खाएका थिए । गत साता मात्र उनले त्यस्तो सय दिन बिताएका छन् र स्मार्ट सिटी बन्ने क्रममा काठमाडौं तीव्र रूपमा विकास गरिरहेको बताएर अचानक अर्को स्मार्ट सिटीको भ्रमणमा निस्केका छन् । यसमा अरू कुराहरू त हुँदै गर्लान्, एउटा मात्र विडम्बना देखिएको छ : यता स्मार्ट सिटीको तयारी भइरहेका वेला काठमाडाैँ र ललितपुरको फोहोर उठ्न छाडेको छ । भदौरे पानी र घामले छिटै सड्ने यो फोहोरले सहरका सडक र गल्लीहरू नाक थुनेरै हिँड्न पनि सकस हुने गरी दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यसबाट नगरवासीको जीवनमा पर्ने रोगव्याधिको प्रकोप र वातावरणीय समस्याबारे त यता चर्चा नगर्नु नै बेस किनभने यस मामिलामा सबैजसो धेरथोर जानकार छन् । पर्यटक होऊन् या दैनिक कामका कारणले सहर निस्कन बाध्य हुने नेपाली नागरिक, सबैको अवस्था एउटै छ । सबैको प्रश्न पनि एउटै छ— मेयरसाबहरू, स्मार्ट सिटीको सपना हामी पनि देख्दै गरौला, तर यो फोहोर उठ्नेचाहिँ कहिले ?
यता, सात वर्षपहिलेदेखि काठमाडाैँको बालाजु बाइपास हुँदै ककनीतिर जाने बाटोको एउटा मोडमा पुगेपछि ओरालो लाग्ने बाटो हुँदै जाने सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर थुपार्ने गरिएको छ । यो साइट सुरु हुनुपहिले पनि काठमाडाैँले कहिले–कहिले त हप्तौँसम्म फोहोरको थुप्रोमाथि बसेर काखीमुनि र नाक–नाकमा सेन्ट छर्केर सभ्य बन्नुपरेको थियो । हो, त्यो सिसडोल साइटको म्याद पनि सकिएको छ । तीन वर्षका लागि भनेर बनाइएको सो साइटमा सात वर्ष फोहोर थुपारेपछि अब विकल्प नभई भएको छैन, तर महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन हिँडेका हाम्रा मेयरसाबहरू भने नगरवासीलाई यतै फोहरमाडौं छाडेर कोरियातिर प्रस्थान गरेका छन् । जब देशका नीतिनिर्माता र निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरू ५० वर्षका लागि पनि योजना बनाउन असफल हुन्छन् अनि समस्या यसरी बल्झिरहन्छ नै । फोहोरमाथिको स्मार्ट सिटीका स्मार्ट मेयर र नागरिकले यसबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्ने स्मार्ट प्रयत्न तत्काल गरून् ।
एमालेले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर आन्दोलित, लाहन नगरपालिकामा मतगणना पुनः स्थिगित